Laharam-pehintany Info. About. What's This?
Cydonia Mensae dia vohontany marsianina eo aminny 33°35N 13°00W. Anisanny ohatra pareidôlia io vohontany io. Taminny 25 Jolay 1946, taminny fihodinany faha 35 manodidonny Mars, ny zanabolana orbiteur Viking 1 dia nisidina teo amboninny laharam-pehintany faha 41 avaratra. Teo no nangalana ny tarehinny Mars anisanny malaza indrindra ankehitriny. Nisy fotoana nolazaina fa fanorenana artifisialy io. Ary hatrizay ny sary vaovaonny tarehinny Mars nalainny saondy Mars Global Surveyor dia mamoaka sary tsaratsara kokoa ani Cydonia Mensae ary naneho fa vohitra voakaoka fotsiny io. Ao aminny faritry ...
Ny teny Gbe API: dia vondrona teny Kwa any antsinanani Ghana sy any andrefani Nizeria. Misy fiteny 20 eo ny isa ny fiteny mifototra aminny fiteny Gbe. Misy valo tapitrisa eo no isa ny olona miteny fiteny avy aminny teny Gbe. Ny fiteny eve no tena be mpiteny indrindra 3 tapitrisa ny olona miteny azy any Ghana sy any Togo, manaraka avy eo ny fiteny Fon 1.7 tapitrisa no miteny azy any Benin. Anatinny ratsanny teny Kwa ny ankabiazanny teny gbe, ary avy aminny ratsambe ny tenny Niger-Kongo izy io. Ny teny mifatotra aminny Niger-Kongo. Ny teny gbe be mpiteny dia ny fiteny aja, ny Fiteny eve, ny ...
Ny angôvonny masoandro dia angôvo avy aminny tanamasoandro tonga eto an-tany. Ny angôvonny masoandro eto an-tany dia mampisy ny fihodinanny rano, ny rivotra ary ny fôtôsentezy ataonireo zavamaniry mba hahafahanny biby miaina. Ny angôvonny masoandro izany dia fototry ny angôvo rehetra misy eto an-tany afatsy ny angôvo niokleary, ny jeôtermia, ary ny angôvo ara-pamonta. Ny olombelona dia mampiasa ny angôvonny masoandro mba hamadika azy ho lasa karazanangôvo hafa: angôvo ara-tskafo, angôvo sinetika, angôvo termika, aratra na biômasy. Ny angôvonny masoandro dia matetika ampiasaina mba hanonona ...
Ny laharam-pehintany na laharam-pehy dia fangitra ara-jeografia manome ny fahavaratana na ny fahatsimoana eo aminny velaranny tany, fajiry na velarana mitelorefy. Ny laharam-pehintany faha-0 dia ny fehibe ary ny laharam-pehintany faha-90 dia ny Tendrontany Avaratra na atsimo. Miaraka ampiasaina aminny laharan-jara hasina ny laharam-pehintany hahafantarana tsaratsara kokoa ny misy ny toerana iray eo aminny Tany.
Tsy ny Tany ihany no ampiasana ny laharam-pehy na zana-pehy fa ny Volana sy ny planeta na fajiry ary ny bolan-danitra koa.
1. Ireo laharam-pehintany
Misy laharam-pehintany manana anarana manokana: ny laharam-pehintany faha 66°33′39″ izao dia faribolan-tendrontany. Any aminny faritra avaratra na atsimo kokoa noho io arakaraky ny ilabolantany isiana dia hitana manontolo andro 24 ora ny Masoandro mandritra ny enim-bolana eo ho eo; izany hoe mazava foana ny andro; ary maizimaizina foana ny andro mandritry ny enim-bolana manaraka.
Misy koa ny laharam-pehintany izay mikasika ny fehibe rehefa tonga ny saolistisy; ny laharam-pehintany mikasika ny fehibe ny 21 Jiona dia antsoina Trôpikanny Asorotany ; ary ny laharam-pehintany mikasika ny fehibe ny 21 Desambra dia antsoina Trôpikanny Adijady.
velarany. Manangona ny ranon ny renirano izy manomboka amin ny laharam - pehintany fahadimy any avaratra hatramin ny faharoapolo any atsimo. Anisan
amin ny fehibe noho ny any amin ny faritra anelanelan - trôpika. ny laharam - pehintany ny fotoana, ny ora mampiova ny haavon ny Masoandro ary noho izany
Isam - ponina 940 800 mpo. Hakitroky ny mponina 17, 92 mpo km2 Fianarana no lova tsara Laharam - pehintany 14, 52 47 Atsimo Laharan - jarahasina 47.59 15 Antsinana
Velarantany 31 046 km2 Isam - ponina 799 675 mpo. Hakitroky ny mponina 25, 76 mpo km2 Fianarana no lova tsara Laharam - pehintany - - - - - Laharan - jarahasina - -
1 112 550 mpo. Hakitroky ny mponina 34, 82 mpo km2 Fianarana no lova tsara Laharam - pehintany 17 49 48 Atsimo Laharan - jarahasina 48 25 48 Atsinanana
Velarantany 16 599 km2 Isam - ponina 1 803 307 mpo. Hakitroky ny mponina 108, 64 mpo km2 Fianarana no lova tsara Laharam - pehintany - - - - - Laharan - jarahasina - -
Velarantany 19 266 km2 Isam - ponina 719 000 mpo. Hakitroky ny mponina 37, 32 mpo km2 Fianarana no lova tsara Laharam - pehintany - - - - - Laharan - jarahasina - -
Velarantany 30 025 km2 Isam - ponina 301 480 mpo. Hakitroky ny mponina 10, 04 mpo km2 Fianarana no lova tsara Laharam - pehintany - - - - - Laharan - jarahasina - -
Velarantany 25 518 km2 Isam - ponina 980 807 mpo. Hakitroky ny mponina 38, 44 mpo km2 Fianarana no lova tsara Laharam - pehintany - - - - - Laharan - jarahasina - -
643 000 mpo. Hakitroky ny mponina 91, 95 mpo km2 Fianarana no lova tsara Laharam - pehintany 19 00 00 Atsimo Laharan - jarahasina 46 46 00 Atsinanana